PressReader - Ilanga: 2018-02-12 - Inkombankombane ngesemenenja
L-DA ifuna kuqashwe
Ilanga - 2018-02-12 - Izindaba - NONHLAKANIPHO SHINGA
SEKUQUBUKE inkombankombane phakathi kwamakhansela kaMasipala uMuziwabantu oseHarding, eningizimu yeKwaZuluNatal, njengoba kuthiwa sekuphele izinyanga eziyisi-9 ingaqashwa imenenja entsha.
Ngokuthola kweLANGA, uMnu Sazi Mbhele ( osesithombeni), obeyimenenja yalo masipala, uphelelwe yinkontileka ngoMbasa ( April) wangonyaka odlule kodwa umasipala wanquma ukumnika inkontileka yezinyanga ezintathu ngesikhathi kusakhangiswa lesi sikhundla.
Kuthiwa ize yaphela leyo nkontileka kungakaqashwa, okuyilapho umasipala ucele ihhovisi likaNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, uNkk Nomusa Dube-Ncube, ukuba lingenelele.
Emuva kwalokho uMnu Mbhele unikwe enye inkontileka yezinyanga ezintathu. Kuphele leyo wanikwa eyesithathu yezinyanga ezintathu, okuthiwa iphele mhla ziyisihlanu kuNhlolanja ( February).
Ngokuthola kweLANGA ngemithombo engaphakathi kulo masipala, kushube isimo emhlanganweni obungoLwesihlanu lapho kuthiwa amakhansela amaqembu aphikisayo abekhala ngokuthi iMeya yaseMuziwabantu, uNkk Dixie Nciki, ibhalele ihhovisi likangqongqoshe icela ukuba liphinde libuyisele uMnu Mbhele kulesi sikhundla ngenkontileka yesine.
Kuthiwa uthe usekhulumile namakhansela kodwa wona athi kawayazi leyo nto, makayihoxise leyo ncwadi. Kuthiwa ngamakhansela eDemocratic Alliance (DA) acele ukuba imeya iyihoxise le ncwadi ngoba kawubanga khona umhlangano wokuvumela- na ngale nkontileka yesine. Amakhansela eDA abenekhophi yale ncwadi.
“Lokhu kakwehlanga kahle kula makhansela kwazise abengazi ukuthi imeya isibhale le ncwadi. Acele ukuba imeya iyihoxise, okuyilapho iphumele ngaphandle namakhansela eqembu layo, i-African National Congress (ANC), bayolumana indlebe. Ibuye yaxolisa ngesenzo sayo,” kusho yena.
Ngokuthola kweLANGA, amakhansela amaqembu aphikisayo ashaya amakhala ngokubamba kukaMnu Mbhele njengoba kuthiwa asola ukuthi kukhona abafuna ukufeza izinhloso zabo ngaye. UMnu Mbhele usebe yimenenja kulo masipala iminyaka eli-11.
Ethintwa ngalolu daba uNkz Nciki, uthe akaphilile usesibhedlela, wacela kuthintwe usomlomo, uMnu Mzwandile Nyathi.
UMnu Nyathi uthe kuliqiniso elingephikwe ukuthi inkontileka kaMnu Mbhele iphele ngonyaka odlule kwabe sekufakwa isikhangiso kodwa bekuthi uma kufanele kube nenhlolokhono kube nezingqinamba, okuholele ekutheni alokhu enikwa izinkontileka zokubamba.
Ngokuthola kwaleli phephandaba, emhlanganweni obungoLwesihlanu umasipala ugcine uvumelana ngokuthi kubambe uMnu Sizwe Malinga oyi- technical director.
UMnu Nyathi uvumile ukuthi ngoLwesihlanu kunqunywe ukuba kubambe uMnu Malinga.
“Kakulona nelincane iqiniso ukuthi kunabantu abangafuni uMnu Mbhele aphume kulesi sikhundla. Selokhu engenile kulo masipala umsebenzi wakhe uwenza ngendlela kwazise sesithole umbiko ongenagcobho kwaze kwaba kathathu,” kusho uMnu Nyathi.
Uthi akakwazi okushiwo ngamakhansela eqembu eliphikisayo ukuthi imeya yenze umkhoshosho ngokubhalela ungqongqoshe ngoba uvumelekile ukukwenza lokho.
UMnu Mbhele uvumile ukuthi inkontileka yakhe iphele ngonyaka odlule, wathi njengoba ebebambile yingoba ubebekwe ngungqongqoshe.
“Mina kusasa ngoMsombuluko ngizozwa ngemeya nongqongqoshe ukuthi ngibuyele ehhovisi noma ngingabuyeli. Okunye okukhulunywayo kangikwazi njengoba bengingekho emhlanganweni obungoLwesihlanu,” kusho yena.
Ikhansela leDA kulo masipala, uMnu Thabani Mbatha, lithi njengeqembu eliphikisayo kabaneme ngendaba yokudembesela kokuqashwa komuntu ngokuphelele kulesi sikhundla.
Okhulumela uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, uMnu Msawakhe Mayisela, uthe uMnu Mbhele nguyena ozoqhubeka nokubamba esikhundleni semenenja kuze kube kubekwa umuntu omusha.